Efatra ihany Crypto fifanakalozana mankatò ny fepetra any amin'ny tany atsimo Koreana regulator - Blockchain News
Efatra ihany Crypto fifanakalozana mankatò ny fepetra any amin'ny tany atsimo Koreana regulator
Tamin'ny faran'ny Janoary, dia fantatra momba ny fandrarana ofisialy ny manam-pahefana ny Koreana Tatsimo tsy fantatra anarana varotra in cryptocurrencies, izay niditra tao kery Janoary 30. Araka ny fepetra ao amin'ny Financial Services Commission Atsimo Korea (FSC), enina banky dia nampanantena mba hanorenana foto-drafitrasa ho an'ny famoronana tantara amin'ny tena anarana. Na izany aza, tahaka ny Hay taty aoriana, banky dia tsy ny manome tolotra vaovao ny mpanjifa ny fifanakalozana Cryptocurrency.
“Ny famoronana tantara vaovao voatendry ny fanakalozam-bola an-tsitrapo dia fanapahan-kevitry ny banky,” ny banky nilaza tamin'ny manam-pahefana orinasa Koreana Tatsimo andiany Yonhap. Nanazava: “Banks izay manana adidy araka ny lalàna mba hisorohana ny famotsiam-bola avy amin'ny teny anglisy ihany no fomba fiasan'ny anatiny: ny fandraisana ho mpikambana ny mpanjifa avy amin'ny crypto fifanakalozana, fahamarinan-toerana ny rafitra, fiarovana ny mpampiasa vaovao sy ny fanarahana manohitra ny famotsiam-bola fenitra.”
Ary tamin'ny enina banky voalaza terỳ aloha, afa-tsy telo – Shinhan Bank, Nonghyup Bank sy ny indostria Bank of Korea – manome kaonty amin'ny mpanjifa ny fifanakalozana Crypto. Ary efatra ihany ny 25 Fanakalozam-bola Koreana Atsimo niova fifanakalozana kaonty tsy fantatra anarana ny kaonty amin'ny tena anarana. Noho izany, ny solombavambahoaka vaovao fepetra mifanandrify amin'ny Bithumb, Upbit, Coinone sy Korbit.
Araka ny Asia ara-toekarena, Shinhan Bank, izay manompo Bithumb, nanapa-kevitra ny fotoana voafetra ihany koa ny manilika ny fifanakalozan-kevitra avy amin'ny dingana ny famoronana kaonty amin'ny tena anarana. Ny solontenan'ny ny banky nanazava fa ity fepetra ity dia efa voafandriky mifandray amin'ny zava-misy fa “ny fifanakalozan-kevitra dia ny polisy avy amin'ny teny anglisy” ao amin'ny raharaha ny tamin'ny taon-dasa ny halatra.
Madinika sy salantsalany izay manome orinasa fifanakalozana kaonty, fa tsy virtoaly ireo, fandrindràna fepetra hafa. Araka ny Yonhap gazety, amin'izao fotoana izao, ny fampiasana ny tantara dia namela orinasa raha toa ny fifanakalozana afaka manohana tanteraka ny tsy maintsy atao mba hisorohana ny famotsiam-bola, ary koa ny mba hahazo antoka ny famantarana ny mpanjifa. Ankoatry ny, dia ho iharan'ny “tsara taratasim-bola amin'ny banky sy ny manam-pahefana ara-bola.” Na izany aza, fifanakalozana maro tsy nandray fanamafisana ny kaonty vaovao ary nilaza Yonhap mpanao gazety fa hampiato ny varotra izy ireo raha toa ny toe-draharaha tsy niova. Araka ny Koreana Blockchain Association, about 787,600 mpanjifa mampiasa ny tolotra toy izany fifanakalozana, izay fananana ireo amin'izao fotoana izao ao amin'ny manjavozavo.
Litecoin (LTC) dia t ...
Coincheck manambara refunds manomboka amin'ny herinandro ambony
Anarana cryptocurre ...
Previous Post:Coinbase fizahan-toetra farany dia manomboka Segwit
Next Post:Tsy ny rehetra ho tafita velona mpitrandraka fampihenana ny vola lany bitcoin
Mey 11, 2018 amin'ny 6:41 AM